Deepin 20.4 yatovepo neLinux 5.15 uye kuvandudzwa muDDE, pakati pevamwe | Linux Addicts
Asingasviki mwedzi miviri mushure previous version, Yava kuwanikwa Deepin 20.4. Kuti udzivise kuvhiringidzika, mea culpa kwenguva yakati yapfuura, zvinofanirwa kujekeswa kuti izvo zvavaburitsa nhasi ishanduro itsva yehurongwa hwekushandisa, ingave «Deepin Linux». Iyo desktop, iyo inogamuchira zita rimwe chete, ingave Deepin Desktop Nzvimbo, kana DDE kwenguva pfupi. Yauya nezvitsva, asi pane chinhu chimwe chete chisina kuchinja: inoramba ichipa mavhezheni maviri ekernel.
Deepin 20.4 yakagadziridza kernels yayo, kurodha iyo LTS kuLinux 5.10.83 uye Yakagadzikana (iyo yakanyanya kugadziridzwa) Linux 5.15.6. Nezvigadziriso izvi vakagadzirisa kusasimba kwehurongwa uye kuchengetedzeka kwakagadziridzwa, nepo akawanda maficha akagadzirwa uye akagadziridzwa kugadzirisa nyaya uye kugadzirisa mushandisi ruzivo.
Inoratidzwa nhau dzeDeepin 20.4
Kernel yekusarudza pakati peLinux 5.10.83 LTS uye Linux 5.15.6 (Yakagadzikana, kunyangwe iri zvakare LTS).
Yakagadziridzwa Chromium kernel.
Mapoka ematebhu uye zvakaunganidzwa zvawedzerwa.
Kutsvaga nekugovana tabhu nekukurumidza kwave kutsigirwa.
Yakawedzera plugin nyowani yekutarisa muSystem Monitor iyo inogona kuona ndangariro uye kushandiswa kweCPU, pakati pezvimwe zvinogadziridzwa.
Kutsvaga kukuru ikozvino kunogona kubatidzwa kana kuvharwa kubva pazvirongwa zvedock, uye nzira dzemafaira nemaforodha mumigumo yekutsvaga dzinowanikwa zvakananga nekudzvanya Ctrl nekudzvanya pazviri.
Huwandu hwemavara anoratidzwa emazita emafaira padesktop anowedzerwa kuti asangane nezvinodiwa nemushandisi, uye zvinyorwa kubva kune wechitatu-bato zvikumbiro zvinoratidzwa muFile Manager kuti uwane nyore uye nekuwedzera kushanda zvakanaka.
Kuvandudza munzvimbo yegraphical (DDE):
New default Wallpaper, inopa chitarisiko chitsva.
Mafaira akadzimwa nekuadhonzera kuTrash icon muDock anogona kudzoserwa neCtrl+Z.
Mapfupi mapfupi ekutora mavara kubva pamifananidzo uye kutora kupuruzira zvidzitiro.
Password kuchengetedza zviziviso paunopinda mairi.
Tsigiro yekugadzirisa nguva yenguva kuratidza chiyeuchidzo chekudzorera mushure mekuvandudzwa.
Inoratidza mazita epahwindo rekushandisa kana iwe uchirova mbeva pamusoro pemaapplication icons muDock.
Ratidza yambiro yakaderera yebhatiri panguva yekuvandudza sisitimu.
Yakadzama uye yakazara runyorwa rwekuchinja, pano. (Shandurudzo Google).
Vashandisi vanofarira vanogona ikozvino kurodha iyo Deepin 20.4 ISO kubva Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Deepin 20.4 yatovepo neLinux 5.15 uye kuvandudzwa muDDE, pakati pevamwe
PineNote: piritsi rinobatika rine e-Ink skrini